Isony-Nokia kwiMWC | I-Androidsis
el_uliulius | | MWC, Izaziso, Sony
Kule nto MWC inkampani Isoftware- isibonisa izinto zayo ezintsha, ezisibekele iiterminal ezinkulu njengezo LG o Samsung, kodwa zisabalulekile.
Eyokuqala kubo Isoftware- Xperia Neo. Itheminali ebandakanya isikrini esikhulu se 3,7 intshi ngetekhnoloji IBravia. Su iprosesa yi-1GHz kunye nekhamera 8MPx kunye nezibuko HDMI. Ewe iza nayo Android 2.3 ifakiwe. Imemori yangaphakathi 320MB (enobulungisa) nangona isandiswa ngu SD encinci ukuya kuthi ga kwi-32GB.
Esinye isiphelo sendlela esizisiweyo Isoftware- la MWC yiyo Xperia Arc. Esi siginali sinamandla ngakumbi kune-Xperia Neo, kuba inescreen esikhudlwana, 4,2 intshi ngetekhnoloji IBravia naye. Inkqubo yakho 1GHz Snapdragon kunye nekhamera yakhe 8Mpx, Iyakukuvumela ukonwabele inkcazo ephezulu yesiphelo. Ngokomgaqo kuza ne Android 2.3 Kwaye akukho kwanto iyaziwayo ngohlaziyo lwayo, kuba uSony-Ericsson uzenzela eyakhe imbonakalo Ixesha lokubaleka kwaye indaleko yayo isalindelwe.
El Xperia Pro yenye yeendlela ezintsha ezinikezelwe kule MWC ukusuka eBarcelona. Sisiphelo esigqamisa ikhibhodi yayo QWERTY yomzimba slidable. Iya kuba nescreen se-3,7-intshi kunye neprosesa 1GHz Snapdragon. Iya kuba neekhamera ezimbini, enye 2MPx ngaphambili yefowuni yevidiyo kunye 8MPx ngasemva njengomntakwabo iVivaz.
Xperia Dlala ungowokugqibela kubazalwane Xperia, kodwa ayisiyonto imbi kakhulu kuloo nto. Iselfowuni ekudala ilindelwe enikezelwe kwihlabathi le- viingcinga, apho phantse yonke into yayisele isaziwa. Kubonakalisiwe ukuba esi sigxina siya kuba Imidlalo engama-50 kususela kwimini yokumka kwakho. Iya kuba nayo Izitshixo zePlayStation ™ ukonwabela ngokupheleleyo eyakho Android 2.3 kunye nemidlalo yabo. 4-intshi 60fps screen ukonwabela amava omdlalo wevidiyo.
Oku kuzisiwe Isoftware- kwi MWC. Uninzi luvakalise ukuba iiterminal zilungile kwintengiso yexesha elizayo. Ingaba ucinga ntoni?
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Iiselfowuni » Sony » I-Sony-Nokia kwi-MWC
Ndicinga ukuba baphume kade !!! Bekufanele ukuba baphume phakathi kunyaka ophelileyo, ngendibanike iinyanga ezintandathu zentengiso, namhlanje andiqondi ukuba ukhona umntu oza kuthenga iqela elizakudlala ngezi zibonelelo kuba sele ziphume ngcono.